Lisitra nohavaozina 2022 | ListaIPTVtelevision.com
Lisitra nohavaozina 2022
Miarahaba anao izahay amin'ny fanangonana tsara indrindra amin'ny lisitra IPTV, Wiseplay ary M3U avy amin'ny Internet.
Ireo lisitra ireo dia nohavaozina tamin'ny ora maro nanaovana fikarohana, koa miangavy anao izahay mba tsy handika sy hametaka azy ireo amin'ny tranokala hafa, fa zarao mivantana amin'ity tranokala ity ny rohy mba hahazoana valisoa.
Ny lisitra tsirairay dia manana baiko avy amin'ny firenena sy ny fantsona ao anatiny mba hahafahanao manivana sy mampiasa ilay tianao hahitana mora foana izay tadiavinao fa tsy mila manandrana rohy arivo hahitanao hoe iza no manana ny fantsona tianao. Koa tsindrio eo amin'ilay tianao, misoratra anarana dia izay.
Mba hisintonana ireo lisitra dia tsy maintsy misoratra anarana amin'ny sehatra fampidinana ianao satria niaro azy ireo tamin'izany fomba izany izahay mba tsy ho azo idirana. Amin'ny fiheverana ny ezaka kely amin'ny fisoratana anarana dia "manaisotra" ny fampidinana maro sy ny faniriana hizara azy ireo amin'ny olona handoro ireo lisitra ireo izahay amin'ny fizarana azy ireo na aiza na aiza, amin'izany fomba izany dia mampitombo ny faharetany rehefa mandeha ny fotoana. Fantatsika fa fahasahiranana kely izany, fa ny haharitra ela dia mendrika izany.
Ho fanampin'izany, noho ity karazana fampidinana ity dia afaka manavao ny lisitra izahay nefa tsy mila manova ny rohy, manavao fotsiny ny lisitra ao anatiny, izay ataonay isaky ny 24-48 ora manamarina fa mbola mandeha ny zava-drehetra ary manamboatra izay tokony hamboarina.
lisitry ny m3u
Jorge Isidro hoy izy:
09 / 03 / 2022 amin'ny 05: 13
Manantena aho fa afaka mampiasa ny lisitrao ary misaotra anao amin'ny hetsika mendri-piderana toy izany
ELIA hoy izy:
18 / 03 / 2022 amin'ny 18: 28
Salama. Mila lisitra m3u ho an'ny SS IPTV aho hijerena baolina kitra sy basikety espaniola
Francisco Monroe hoy izy:
06 / 05 / 2022 amin'ny 16: 44
Tsara dia vonona silve ahy ho an'ny iptv platform smasters lite
Edward Martino hoy izy:
08 / 06 / 2022 amin'ny 16: 16
Manana mpanome tolotra aterineto any Arzantina aho. Afaka ampidirina amin'ny tambajotra ve ireo fantsona ireo?
16 / 06 / 2022 amin'ny 13: 21
Azo antoka fa tsy maninona izany raha mbola manana fifandraisana Internet ianao.
24 / 03 / 2022 amin'ny 13: 28
afaka mandefa ahy lisitra movistar ve ianao?
Juan Mauricio Eguez Murillo hoy izy:
03 / 04 / 2022 amin'ny 19: 28
Liana amin'ny ling ho an'ny ss iptv aho
Valentine hoy izy:
10 / 04 / 2022 amin'ny 21: 28
Salama, liana amin'ny lisitra iptv aho
Jacqueline Lucia Lopez De la Rosa hoy izy:
28 / 04 / 2022 amin'ny 01: 25
Salama hariva, ahoana no ahafahako maka sy misintona lisitry ny iptv Colombia
13 / 05 / 2022 amin'ny 23: 02
Misaotra raha manana iptv misaotra
25 / 05 / 2022 amin'ny 14: 18
MANAO AHOANA AHOANA NO HAHAZO NY LISTS M3U MAIMAIMPOANA NOhavaozina, MISAOTRA, MIANDRY NY VALIANAO
Adolfo hoy izy:
27 / 05 / 2022 amin'ny 03: 58
Liana amin'ny lisitry ny andrid-ko aho
Israel Rodriguez hoy izy:
06 / 06 / 2022 amin'ny 06: 04
Te-hahazo ny lisitra aho mba hampavitrika mx yplier latino